'Red Dead Redemption 2' dia manana mpamono olona ao amin'izy ireo Thar Hills - Lalao
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny 'Red Dead Redemption 2' dia manana mpamono olona ao Thar Hills
Ny 'Red Dead Redemption 2' dia manana mpamono olona ao Thar Hills
by Trey Hilburn III Novambra 28, 2018
by Trey Hilburn III Novambra 28, 2018 1,516 hevitra
Eny, ny mpamono olona raha toa ka toa ahy, dia mbola mamakivaky ny tendrombohitra sy lohasaha ary honahona ihany Red Maty Fanavotana 2, avy eo fantatrao fa be dia be ny zavatra hita ao amin'izy ireo. Ireo zavatra hita ireo dia miainga amin'ny hysterical ka hatrany amin'ny delestazy mahitsy.
Ny iray amin'ireto zavatra hita ireto dia somary aloha be teo ivelan'ny Valentine. Nahamarika voromahery marobe nanantona ahy aho ary nanapa-kevitra ny hanadihady. Nahita fatana tokana nihantona teo amina rafitry ny tetezana iray niaraka tamin'ny taolana sy ny tsinainy niparitaka aho. Nisy loha notapahina nohomboina tamin'ny tsato-kazo iray niraikitra tamin'ny vavany. Rehefa avy nisora-bato aho dia hitako fa sombin-tsarintany io ary niainga niaraka tamin'ny iraka mba hahatongavana any amin'ny farany ambanin'io.
Ho an'ireo efa mahazatra ny lalao, fantatrao fa malalaka izao tontolo izao. Ny fitadiavana faty telo dia sady mampiankin-doha no fanjaitra tanteraka amin'ny toe-javatra ahitra. Tsy nanampy an'izany aho, tena nanohitra ny hijerena ireo toerana ambony amin'ny Internet aho. Ny toe-javatra filalaovana sasany dia misy valiny kokoa rehefa mahita azy ireo ara-organika, farafaharatsiny ho ahy.
Noho izany, taorian'ny fikarohana be loatra dia nitarika sary famonoana olona roa hafa nahatsiravina ilay voalohany aho. Ny tsirairay dia samy manana vatana mangatsiaka sy loha voatapaka feno sombin-tsarintany.
Rehefa atambatra miaraka ny sarintany dia mitarika mankany amin'ny tranobe rivo-mahery feno sombin'ireo olona iharan-doza tsy ampoizina. Mandritra ny fikarohana ao amin'ny cellar mahantra Arthur Morgan dia voatsindry ary voahitsaka.
Rehefa mifoha i Arthur, ilay mahia mahia, Edmund Lowery Jr dia mijoro eo ambonin'i Arthur manazava ny fisehoany, sy izay nokasainy ho an'ny koboy tsy mampalahelo.
Miaraka amina hetsika fohy vitsivitsy dia afaka mamadika ny latabatra i Arthur ary mety hamono na hogtie Edmund.
Fikatsahana mangatsiaka ity izay voalohany tamin'ireo atody Paska nampihoron-koditra nanerana ny tontolo RDR2.
Inona no atody paska mangatsiaka indrindra sendra anao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Red Maty Fanavotana 2 mivoaka izao na aiza na aiza.